निर्माण - उपयोगी र धेरै रोचक सबै उमेरका बच्चाहरुको लागि के गर्न। बच्चाहरु आन्दोलनहरु, समूहीकृत वस्तुहरु समन्वय गर्न सिक्न, fantasize गर्न रचनात्मक दृष्टि र तार्किक सोचाइ विकास गर्न: यस्तो खेल पक्षमा overestimate गर्न गाह्रो छ। र निर्माता गर्न सानो संसार बारे जान्न, प्राप्त ट्याक्टायल र दृश्य sensations आधारमा रंग र रूप अवधारणा थाह। तर निर्माता नयाँ र असामान्य प्रजाति यस्तो शैक्षिक खेल की, आफ्नो laurels मा आराम छैन। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका मा छोराछोरीको डिजाइनर Battat सुई एक वास्तविक शैक्षिक खिलौने बजार जान्न-कसरी भएको छ विकास गरे। के यो रमाइलो बारेमा यति विशेष छ? डिजाइनर कस्तो दायरा यस निर्माता प्रदान गर्दछ? यो बच्चाको खेलौना के उपभोक्ता समीक्षा? सबै प्रश्नहरूको जवाफ - हाम्रो सामाग्री मा।
सुई डिजाइनर को लाभ
यो बच्चा कुनै पनि प्रकारको निर्माण औंलाहरु को मुख्य एक motility विकास हुन्छ भनी कुनै गोप्य छ। मनोविज्ञान र शरीर विज्ञान ठीक मोटर कौशल र भाषण स्वामित्व को स्तर बीच घनिष्ठ सम्बन्ध साबित भयो। साथै, यस्तो खेल तार्किक सोच विकसित समयमा, रचनात्मकता र कल्पना बच्चा बुझे।
यसरी Battat निर्माता (सुई) सामाग्री को लचीलापन र मालिश सुई उपस्थिति को फाइदा छ। यी बच्चा को गुणहरू धन्यवाद भागहरु विभिन्न कोण मा र विभिन्न संयोजन जडित रूपमा गर्भधारण निर्माण गर्न धेरै सजिलो छ। साथै, ब्रान्ड-नयाँ डिजाइनर बच्चा मालिश पाम, मस्तिष्क केही क्षेत्रहरू सम्बन्धित स्पर्श अंक सक्रिय। तसर्थ, खेल तपाईं मात्र होइन बच्चालाई रम्न, तर पनि बच्चाको बौद्धिक क्षमता विकास गर्न अनुमति दिन्छ।
ब्रान्ड को डिजाइनर को माथि गुण आधारित यो खेल एक विस्तृत उमेर सीमा छ कि अन्तमा गर्न सकिन्छ, र जन्म देखि6वर्ष सबैभन्दा बच्चाहरु को लागि सान्दर्भिक हुनेछ। तसर्थ, उपकरण विवरण खेलको कठिनाई स्तर आधारमा फरक हुन्छ।
फाराम डिजाइनर Battat
बी डट र Bristle ब्लक: ब्रान्ड Battat समान सुई डिजाइनर को2श्रृंखला उत्पादन गर्छ। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य उपयुक्त छन्। फरक बी डट मध्य र उच्च विद्यालय उमेर बच्चाहरुका लागि डिजाइन गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित। मुख्य कारण - यो जटिल रंग प्यालेट, सजावट, सानो र घुमाउँदा भागहरु छ। तर, रूपमा पनि एक वर्ष पुरानो बच्चाहरु वयस्क द्वारा निरीक्षण गर्दै उपभोक्ताहरु को समीक्षा, द्वारा प्रमाणित तिनीहरूलाई खेल्न यस्तो निर्माता र रमाइलो मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ।
तर, निर्माता छोराछोरीलाई एक तीन वर्ष देखि चयन गर्न को लागि सुझाव कम विवरण सेट गर्छ। फिट त बच्चाहरु जनावर र मान्छे को मूर्तिहरु संग सेट गर्छ।
एक प्लास्टिक vedertse, ट्यूब, कन्टेनर वा झोला मा - केही सेट एक साधारण गत्ता बक्स, अन्य मा पैक छन्। निस्सन्देह, डिजाइनर भण्डारण लागि कन्टेनर उपस्थिति - एक मनोरंजक खेलौना एउटा उपयोगी र व्यावहारिक साथै।
बक्समा सुई डिजाइनर
यस दफ्ती बेचिएको निर्माता सुई Battat Bristle ब्लक। किरा मा 36, 56 वा 112 टुक्रा भएको यो खेल को साधारण संस्करण हो। सेट एक परिपत्र परिक्रमणगर्दैछ पाङ्ग्रा सहित विभिन्न ज्यामितियआकार, को भागहरु हुन्छन्। निर्माता खेल दुई वर्ष देखि बच्चाहरु लागि निमित्त संकेत गर्छ। तर ग्राहक समीक्षा विश्लेषण गरेर, यो उमेर छोराछोरीको अक्सर सरल ज्यामितियआकार को एक एकीकृत डिजाइन आत्म-निर्माण मा कठिनाई छ भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसैले, आमा तीन वर्ष भन्दा छोराछोरीलाई लागि खरिद गर्न डिजाइनर यस प्रकारको सुझाव दिन्छौं।
लगभग 1 हजार औसत एउटा सानो सेट लागत। Rubles, 1300 rubles मा औसत लागत, सुई डिजाइनर Battat (सेटमा 112 टुक्रा) 2500 rubles लागत।
एक बाल्टिन मा डिजाइनर
सुई डिजाइनर Battat एक बाल्टिन मा भागहरु को एक समान सेट छ। Bristle ब्लक 50 विभिन्न रङ को geometrical तथ्याङ्कले र घुमाउँदा पाङ्ग्रा हुन्छन्। एक सेट जस्तै लागत 1300 rubles छ।
नरम कन्टेनर वा 68 भागहरु मा एक प्लास्टिक जार खचाखच भरिएको डिजाइनर शृंखला बी डट «Stakduz" मा। यसलाई थप गैर-मानक तत्व अलग छ। यसलाई 3000 देखि 3500 rubles गर्न एक सेट हुनुपर्छ।
"जादू सुटकेश" को सेट
उल्लेखनीय सेट Bristle ब्लक (डिजाइनर) एक मामला मा 50, 85 र 113 भागहरु छन्। यस्तो एकाइहरूको लागत2देखि4हजार छ। Rubles। तिनीहरूले कुनै एक सुविधाजनक भण्डारण कन्टेनरको उपस्थिति लागि बाहेक, एक गत्ता बक्स मा पैक को सेट, फरक छन्। साथै, पुरुष र पाल्तु जनावर थपियो तथ्याङ्कले को एक ठूलो सेट।
"को जंगल मा यात्रा" सेट
विशेष ध्यान श्रृंखला देखि जनावरहरु संग Battat डिजाइनर सुई हुनुपर्छ "यात्रा जंगल गर्न।" यस्तो किरा एक प्लास्टिक कन्टेनर (58 भागहरु), एक बाल्टिन (128 भागहरु) वा ट्यूब (54 भागहरु) मा प्याकेज छन्। एक सुविधा पशु तथ्याङ्कले, रूखहरू निर्माण गर्न भागहरु को उपस्थिति छ। यो कन्फिगरेसन धन्यवाद, पनि सानो बिल्डर्स प्लट, यसको बिट संग आउन, वन्यजन्तु एक जादुई दुनिया सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछ।
साथै, कन्टेनर को ढक्कन पनि बनेको छ यो सुई को डिजाइनर छ। तसर्थ, छोराछोरीलाई गर्दा विवरण सुरक्षित आपसमा fastened हुनेछ, एक सहज समतल सतह मा एक "को जंगल को दुनिया" को निर्माण गर्न सक्छन्।
35हजार को यस्तो सेट को मूल्य। Rubles।
"को खेत मा" डिजाइनर
दुई वर्षको देखि बच्चाहरु को लागि एक रोमाञ्चक शैक्षिक खेल - "को खेत मा" डिजाइनर Battat सुई। यो 67 भागहरु हुन्छन्। यहाँ पाल्तु जनावर लागि आरामदायक घरेलु निर्माण गर्न सबै छ। प्रयासमा पनि मानव तथ्याङ्कले, साना ट्रक, र बगैचा उपकरण हो। यो खेल बच्चाहरु र बच्चाहरु रूपमा धेरै मजा ल्याउनेछ। यो kosnstruktoru बच्चाहरु मार्फत दुई वर्ष जनावर, ज्यामितीय आकारहरू र रंग को नाम थाह प्राप्त। बच्चाहरु विषय-भूमिका-खेल खेल "द फारम" को यस्तो सेट खेल्न, र एक मा धेरै सेट जडान गर्न प्रयास प्रस्ताव गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ यस्तो लगभग4हजार निर्माता छ। Rubles।
सुई सेट डिजाइनर "muzzles"
Battat निर्माता "Spinruz" को एक सेट रूपमा, बच्चाहरु को लागि यस्तो असामान्य निर्माता प्रदान गर्दछ। यो सानो घरहरू, सडक र अरूको लागि बाहेक, हामी चार हास्यास्पद मानिसहरू बनाउनु गर्न सक्छन्, जो आधारित 75 आइटम, को हुन्छन्। प्रत्येक वर्ण यसको आफ्नै मुड (आनन्द, दुःख, आश्चर्य, डर) छ रूपमा कारण यस्तो "थूथन" गर्न छोराछोरीलाई भावना को एक किसिम गर्न, शुरू छन्। यो खेल मात्र बौद्धिक र भाषा विकास मामलामा उपयोगी छ, तर पनि बच्चाको psycho-भावनात्मक क्षेत्र योगदान पुग्छ। एक सेट 5500 rubles को लागि हुन सक्छ किन्न।
सुई निर्माता को समीक्षा
यो बीचमा उपभोक्ताहरु सुई डिजाइनर Battat धेरै लोकप्रिय छ। समीक्षा भन्न कि, यो खेल द्वारा निर्माण मास्टर भाषण अघि जो बच्चाहरु। साथै, त्यहाँ साथीहरूमध्ये टोलीमा बच्चा को बौद्धिक विकास मा एक चिह्नित वृद्धि, समाजमा बच्चा को मिलाइएको प्रक्रिया बढाने नै छ, छ।
सङ्कलन Battat सुई डिजाइनर, फुर्सदको समय खर्च गर्न खुसी सबै उमेरका बच्चाहरु। पूर्व-विद्यालय शैक्षिक संस्थाहरू मा यस्तो कक्षाहरू सिफारिस गरियो। यो गतिविधि कार्यक्रम को उद्देश्य लागू एकै समयमा, पूर्वप्राथमिक बच्चाहरु को दैनिक गतिविधिहरु विविधता मदत गर्नेछ तर्क को विकास, सेन्सर प्रविधि, रचनात्मक सोच, सुसंगत बोली।
यसरी, Battat डिजाइनर सुई - पूर्वप्राथमिक र प्रारम्भिक विद्यालय उमेर लागि एक मनोरंजक शैक्षिक खेल। यो गतिविधि विकास गर्न योगदान ठीक मोटर कौशल को, भागहरु को लचीलापन र आफ्नो सुई-जस्तो संरचना कारण हासिल छ जो। दुई वर्ष भन्दा पुरानो बच्चाहरुका लागि सिफारिस गरिएको सुई डिजाइनर। तर, ग्राहकबाट प्रतिक्रिया, पनि वर्षीया बच्चा भएको यो खेल mastering मजा अनुसार। साना छोराछोरीलाई लागि, यो तथ्याङ्कले संग किरा खरिद गर्न सिफारिस गरिएको छ। पुरानो प्रिस्कूल आफ्नै सपना छ र ज्यामितीय आकारहरू को नायक सिर्जना गर्न, खेल को षड्यन्त्र निर्माण, विवरण हुनेछ।
Prams - आधारभूत तत्व को समीक्षा
शिशु सूत्र "Neocate": संरचना, आवेदन र चिकित्सकहरु को प्रतिक्रिया
के रोग एक बच्चा एक बढेको कलेजो संकेत गर्न सक्छौं?
बच्चाको जीवनको पहिलो दिन। नवजातको हेरचाह
छोराछोरीको 13वर्ष देखि ह्यान्डल संग साइकल: विवरण, समीक्षा
ज्यामितियआकार बारेमा रहस्यहरुलाई के हुन्
आफ्नो हातमा एक poncho कसरी सी गर्न? आफ्नै हात Poncho: योजनाहरु र वर्णन
अन्त्येष्टि: अर्थोडक्स परम्परा, चलन
Uterine adenomatosis - यो के हो?
Hypoglycemic चक्की "Glibomet": प्रयोगको लागि निर्देशन
"पिज्जा पनीर": सेन्ट पीटर्सबर्ग रेस्टुरेन्ट को एक श्रृंखला
Karyotypes - यो .... कहाँ karyotype लागि परीक्षण छ?
घरमा एक्वाफ्रिन्ट कसरी बनाउने?
सुशील सैलुन "खुट्टा मा वर्ग"
कसरी खेल गतिविधिहरु पूरा गर्न: व्यायाम पछि तल ठंडा
Stalin मृत्यु र शक्ति को लागि संघर्ष
रूसी लोक Tales: इवान Tsarevich विवरण
मास्को मा राम्रो Gastroenterologist: समीक्षा